Falalka Hanjabaadda Qareemmada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Qareemmada maxkamadaha oo xaaladdooda laga deeyriyey. Foto: Leif R Jansson/Scanpix
Domstolshot - rättsväsendet allt oftare hotad
Falalka Hanjabaadda Qareemmada
La daabacay onsdag 29 september 2010 kl 12.49
Maxkamadaha ayaa daboolka saara hanjabaadda iyo khatarta loo geeysto qareemmada, sida ay sheegtay garsoorad Monica Nibelius, iskana wareejisay toddobaadkii ina dhaafay xilkii maxkamad ku saabsanayd dembi la xiriiray fataalid laguna qaadayay maxkamad ku taala magaalada Malmö.
Maalintii shalayto ayay soo shaac baxday in qareenaddu ay xilka uga tagtay iyada oo hanjabaad loo geeystay, halka maxkamadduna falkaa daboolka u saartay ammaanka daraaddii, sidoo kalena sheegtay in ciidanka ammaanka qudhiisu kula taliyay iney hoowsha iska wareejiso.
Qareenka iminka hoowsha kala wareegay Nebelius ayay ciidanka ammaanku keenaan maxkamadda kana kaxeeyaan. Xeer ilaaliyaha maxkamadda qudhiisa ayaa sidoo kale hanjabaad loo geeystay. Waana mid halis gelinaysa mabaadiida cadaaladda iyo dimoqoraadiyaddaba, sida ay qortay Monica Nebelius. Madaxa ururka qareemmada Juseks laantiisa maxkamadaha Anders Bengtsson ayaa fikirkaa la qaba.
- Waa fal halis ku ah curyaaminna kara hoowlaha maxkamadaha, gaar ahaan haddii lagu guuleeysto falalkaa. Iyo in shaqaaluhu dareemaan ammaan-darro waa mid la xiriirta dhibaatooyin ka taagan beeyadda goobaha shaqada. Waxaa sidoo kale loo baahan yahay in tallaabooyin laga qaado sidii looga hor-tegi lahaa.
" Haddii middan i qabsatay oo kale ay ku dhacdo qareen, uuna qabsan kari waayo hoowshiisa qareennimo, waa mid calaamad u direeysa in falalka noocaniya la aqbalay, sida ay ku sheegtay maqaal ay Monica Nebelius ku soo daabacday wargeeyska DN. Anders Bengtsson ayaa ka qaracsan falkan laba siyaabood dartoodba:
- In qareen lagula kaco fal hanjabaad, islamarkaana uu hoowshii iska wareejiyo. Waa mid dhalineeysa natiijo ah in ciddii falka geeysatay markaa ula muuqato inay guuleeysatay.
Ururka Jusek oo horraantii sannadka su’aalo ka weeydiiyay xeer ilaaliyeyaasha, boliiska, iyo maxkamadaha xaaladda goobahooda shaqo. Xeer ilaaliyeyaashii ka soo jawaabay ayey 40% sheegeen in aanay ammaan ku dareemin goobahooda shaqo, halka 25% ee ka mid ahina jir dill, hanjabaad iyo faduul lagula kacay.
Baaritaankaa kadib ayuu ururka Jusek u soo jeediyay dawladdu inay miisaaniyad geliso sidii loo hagaajin lahaa maxkamadaha, loo suurta-gelin lahaa ammaankooda. Inta jawaab middaa laga helayana waa in kor loo qaado ammaanka qareemmada ey la soo gudboonaadaan falal noocaasiya sida falkan Malmö ka dhacay. Waana hoowl socon doonta inta maxkamadu socoto. Xaqiiqdii maaha sidan hab ey goobaha cadaaladdu u shaqeeyaan, sida uu sheegay Anders Bengtsson.
- Waxaannu leenahay caado soo jireen ee hab furfurnaan ee aynaan dooneyn inaan wax ka badalno, hase yeeshee wuxuu isku dhac ka imanayaa xiise kala duwan ee hoowlaha bulshada, ayaa la oran karaa. Waxaa jira dadyoow qaba in haddii la kordhiyo kontroolka goobaha cadaaladda ay keeni karto in hanjabaaduhu sii bataan loona dareemo xaalad ammaandarro, halka ay wax ka xasilin lahayd. Anders Bengtsson, madaxa ururka qareemmada Juseks laantiisa maxkamadaha.